Zvisingafungidzike uye Epic Mitambo Partner uye Gadzira Akavhura Engines Fund | Linux Vakapindwa muropa
Iyo UK yakavakirwa gore vhidhiyo mutambo simulation software kambani, Hazvirambike Worlds Yakatemerwa, yakasaina ichi Chishanu neMitambo yeEpic, mubatanidzwa wekumisikidza "mamwe akavhura injini" kubatsira vateereri vemitambo.
Uyu Sangano rakauya apo Kubatana kwakabvisa rezinesi reImbprobable, iyo inoita kuti isakwanisa kwayo kuenderera mberi nekushandisa Unity inozivikanwa mutambo wekuvandudza injini uye nekudaro inokanganisa kugona kwekambani kutsigira mitambo.
Zvita Zvita, Kubatana Technologies, Kubatana multiplatform mutambo injini opareta, yakagadziridza mazwi ayo ebasa nekuwedzera mamwe mabara.
1.1 Uye saka kushamwaridzana kwakamuka
A Unity blog post muna Zvita 5 yakati:
«Nokurodha pasi, kuisa kana kushandisa Unity software munzira ipi neipi, unomiririra uye unosimbisa kuti iwe waverenga, wanzwisisa uye unobvuma kusungwa zviri pamutemo uye kutevedzera aya mazwi ekushandisa software.
Kana iwe usingabvumire kune aya mazwi ekushandisa software, unogona kusashandisa iyo Unity software neimwe nzira. «
Mamwe mazwi akaunzwa neUbatana anoenderana padanho rekukodzera yeUnited software "Tier Inokodzera" sZvinoreva kuti yako yakazara mari haigone kupfuudza iyo yemari zvikumbaridzo zvakagadzirirwa iyo Unity software tier iyo iwe (kana avo vanopa masevhisi) yaunoshandisa. Yakanga yakanyorwa pane Kubatana blog.
Zvadaro, Kubatana kwakatsanangidzirwa kune Zvisingafungidzike kuti mushure meiyi shanduko, muparidzi weyekufananidza software yemitambo yemitambo yegore akatyora mazwi ekushandisa kana kugadzira SpatialOS mitambo vachishandisa Kubatana, kusanganisira yekuvandudza uye yekugadzira mitambo.
Sekureva kweIkusanzwisisika, shanduko iyi yakaitika paakanga ari mubhizimusi rezvebhizinesi rakavhurika neUnited kuti awane nzira yekushanda pamwe chete.
Tim Sweeney, CEO weEpic Mitambo, vakapindura ichi chiziviso kubva Kubatana mu tweet vachimupomera shanduko yake. mutemo unobvisa chibayiro chakakura chakaitwa nevagadziri pamusoro pemakore "kuvaka chimwe chinhu."
Uye saka kushamwaridzana kwakamuka
Iyo blog inotumirwa nevaviri vaviri vatsva vanoti inoti:
"Kubatsira vanogadzira kuisa kusanzwisisika shure kweinjini nyowani nekusawirirana kwebasa kwaziviswa nhasi, Epic Games neImprobable vari kushanda pamwechete kwe $ 25,000,000 yemari yakabatanidzwa kubatsira vanogadzira kuchinjira kune injini, masevhisi uye ecosystems. Yakavhurika.
Iyi mari ichauya kubva kwakasiyana masosi, kusanganisira Unreal Dev grants, Zvisingafungidzike mari yekutsigira mari, uye mari kubva kuEpic Games chitoro. «
Sekureva kwake blog positi, shanduko dzichangoburwa kuUniity dzinobvisa vanogadzira ramangwana ravo kugona kusarudza vakasununguka pakati peinjini, Middleware SDK, zvitoro uye vanopa gore vanopa.
Uye zvakare, ivo vanosiya mimwe mitambo mukusimudzira mune kusagadzikana kwepamutemo.
Kugadzirisa izvi, Epic Mitambo uye Zvisingafungidzike zvinoda kubatanidza kugona kwavo kuti vape vanogadzira mutambo kusanganiswa kwakanyanya kweinjini uye humwe hutekinoroji, nepo tichiremekedza kugona kwevanogadzira kusarudza vakasununguka vavanoshanda navo uye zvigadzirwa zve software.
“Chekutanga, tinoda kusimbisa kubatana kwedu.
Unreal Injini inopa yakazara C ++ sosi kodhi yemunhu wese, uye rezinesi rayo rinoona kuti rinoramba rakavhurika kune vese vanogadzira mutambo uye vepakatiware vanopa, uye inobvumidza munhu wese kubatana pamwe kuburikidza neSADKs, masevhisi, uye sosi kodhi masosi.
Saizvozvowo, Zvisingafungidzike zviri kuvandudza yakazara yakavhurika Unreal kusangana kune yayo epamhepo mutambo wekusimudzira chikuva, SpatialOS.
Iko kusanganisa kunogonesa vanogadzira kuti vakurumidze kuvaka uye kuendesa ese anoramba uye maviri-echikamu-akavakirwa mapuratifomu kutenderera pasirese ne Unreal Injini kugona uye akawedzera masimba eanogovaniswa komputa uye gore masevhisi. «
Kana zvese zvifamba, chichava kutanga kwakanaka kweIkusapindika mushure mekutanga kwakaoma uku kwegore, yakapihwa kuzvipira kweye shamwari yayo nyowani Epic Mitambo, muridzi weFortite, mutambo ungadai wakashandisa mihoro yeEpic Game muna 2018 kusvika kumadhora mazana matatu emadhora nekuda kwekutengeswa kwezvakawedzerwa zvemukati.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Linux Vakapindwa muropa » General » Noticias » Zvisingafungidzike uye Epic Mitambo mudiwa uye gadzira homwe yekugadzira injini dzakavhurika